विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंका र बंगलादेश भिड्दै, पल्लाभारी कसको ? - Nepal's Digital News Paper
विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंका र बंगलादेश भिड्दै, पल्लाभारी कसको ?
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज श्रीलंका र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा ३ बजे सुरु हुनेछ। काउन्टी मैदानमा दुवै टोली सहज जितको खोजीमा हुनेछन्। दुवै टिम जित निकाल्दै शीर्ष चारको सम्भावना कायम राख्ने दाउमा छन्। श्रीलंकाविरुद्ध बंगलादेश दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ।
दुवै टिम जित निकाल्दै शीर्ष चारको सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ । तर, दुवैलाई वर्षाको डर रहनेछ । किनकि पछिल्लो साता वर्षाको कारण केहि खेलहरु स्थगित भएका छन् । श्रीलंकाविरुद्ध बंगलादेश दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । अघिल्ला तीन खेलमा एक जित र दुई व्यहोरेको बंगलादेशको २ अंक रहेको छ । बंगलादेश आठौं स्थानमा रहेको छ ।
श्रीलंका पनि दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । अघिल्ला ३ खेलमा एक जित, एक हार र एक बराबरी खेलेको श्रीलंकाको ३ अंक रहेको छ । श्रीलंका छैटौं स्थानमा रहेको छ । दुई टोलीबीचको पछिल्ला नतिजा श्रीलंकाको पक्षमा रहेको छ ।
पछिल्लो ५ भेटमा श्रीलंकाले ३ खेल जितेको छ । बंगलादेशले २ खेलमा जित निकालेको छ ।